नेपाली सेनामा अर्बौ भ्रष्ट्राचार तत्कालीन प्रधानसेनापति मुछिए ! « The News Nepal
नेपाली सेनामा अर्बौ भ्रष्ट्राचार तत्कालीन प्रधानसेनापति मुछिए !
काठमाडौँ । देशको गौरवको रुपमा रहेको नेपाली सेना भित्र विवाद सिर्जना भएको छ । नेपाली सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन)खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको छ । अढाई अर्बमा पाइने प्लान्ट किन्न सेनाले केही ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा चार अर्ब खर्चिने निर्णय गरेको खुल्न आएको छ । राज्यलाई झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ भार पर्ने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले प्लान्ट खरिद निर्णय टुंग्याएको स्रोतले बतायो ।
जानकारहरूका अनुसार उक्त प्लान्ट अढाईदेखि तीन अर्ब रूपैयाँमा पाइन्छ । विवादका कारण सेनाले अहिलेसम्म गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट किन्न सकेको छैन । बाहिरबाट खरिद हुँदै आएको गोली नेपालको सुन्दरीजलमा राख्ने तय भएको थियो । वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्यमा प्लान्ट किन्ने सम्झौता भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।